Dagaal ka qarxay duleedka magaalada Xudun ee Gobolka Sool
Wararka naga soo gaaraya saaka magaalada Xudun ee Gobolka Sool ayaa sheegay in uu ka qaraxy dagaal u dhexeeya ciidanka Somalilland iyo kuwa Kaatumo , dagaalka ayaa waxaa uu ka bilowday degaanka Cadweyn iyo Gobley oo koonfur bari uga begaan magaalada Xudan oo ilaa 83 KM u jirta magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool.
Dagaalka saaka socda ayaa ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen 6 qof oo ka mid ah ciidamada dagaalku u dhexeeya waxaan wararka soo baxay ay sheegayaan in ciidanka S/lland ay hellayaan gurmad halka dadka degaanka Xudun iyo degaamada ku xeeran oo abaabulan ay dagaalka ku soo biirayaan waxaan laga cabsi qabaa in dagaalku uu dhaliyo khasaaro fara badan iyo in uu ku fido degaano hor leh.
Dagaalka ayaa waxaa sababay ka dib markii Maamulka S/land ay isku dayeen in ay magaalda Xudun soo galiyaan Sanaadiiqda cod bixinta golaha deegaanka ee Somaliland ka dibna ay ciidamo ka tirsan Kaatumo ay dagaal ku qaadeen xubnihii waday sanaadiiqda. Odayaasha Xudun ayaa shalay ka digay in maamulka Somalilland ay magaalada keenaa Sanaadiiqadda doorashooyinka ee golaha deegaanka ee Somaliland taas oo sababi karta dagaal iyo khasaaro iyo deganaasho la’aan ka dhacda Gobolka Sool guud ahaan.
Dagaalka saaka ayaa ku soo beegmay maalin ka dib markii magaalada Xudun lagu qabtay Guddoomiyihii hore ee magaalada Laascaanood ahna guddoomiyaha ururka Xaqsoor Cali Maxamuud Axmed Cali Sandule.